musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiPutukezi Vatambi Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Cheeky". Our Diogo Dalot Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekufamba kwake uye muviri. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveBiogo Dalot's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
José Diogo Dalot Teixeira akaberekwa musi we 18th waMarch 1999 mukati Braga, Portugal. Akaberekerwa kumubereki wake Mrmai naMadzi Dalot Teixeira. Zvakakosha kuziva kuti baba vaDiogo ndivo vane Dalot zita apo mudzimai wake (amai vaDiogo Dalot) vane yavo Teixeira zita.
Dalot akakurira nehanzvadzi yake inofadza, Mariana (inoratidzwa pasi apa) waanoona seshamwari yake yepamwoyo kubva paudiki hwake mazuva.
Nezvemhuri yake, anouya kubva kumumhanzi wechiKristu wakazvipira kumba. Ichi ndicho chikonzero chechikonzero chedu; Vabereki vaDiogo Dalot vaiva vadikamwi vemimhanzi uye vaimbi vakakurumbira uye vakawira murudo muchechi vachiimba seChomasmaster uye Choirmistress.
Hazvishamisi, hanzvadzi yake huru Mariana aiva munhu wokutanga mumhuri yeDalot uyo akagara nhaka yeimba yekuimba kubva kuna amai nababa. Zvinosuruvarisa, vabereki veDiogo Dalot vakanga vasina nyaya nevana vavo voga vari mutambi wenhabvu, panzvimbo yemuimbi kunze kwevamwe vabereki vangaratidza. Vakaona mwanakomana wavo achizvipira kumutambo kubva paudiki hwake. Kuti aratidze kuti akazvipira sei kumutambo, Dalot akambosangana nekoriti inokosha inorongwa naMariana kuitira kuti ararame zvakanaka uye agadzirira mutsara. Pasina mubvunzo, izvi zvinonyatsoenderana neunhu hwake. Pasi pane mufananidzo waMariana Dalot achiita zvaanoziva kuita zvakanaka.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Career Buildup
Kunyange sechidiki, tarenda yaDalot yainyanya kuonekwa kuti vose vaone pakarepo paakatanga kutema bhora uye kunyanya kukosha, kuratidzira kuvimbika kune kechikamu chake chaanoda mwana, FC Porto.
Chido chaDiogo Dalot yebhola rakamuona achinyora pamutsara wechikwata chechidiki chemauto, Fintas academy uyo akamupa mukana wekuratidza mararamiro ake.
Kubvira paakabatana neFintas academy mudhorobha rake reBraga panguva ye6, Dalot akazviratidza kuti ave mukuru uye mukurumbira waakawana pazera duku. Kare kumashure, simba rake rokubata mukurumbira rakava zvakananga nekukwanisa kwake kubata bhora. Kuzivikanwa kwake kwakasvika pachikwata chekuti Fintas vadzidzisi vaifanira kumurega kudzidzisa nevana vatatu vamakore kupfuura iye, izvo zvinoshamisa zvikuru kune boka iroro rezera.
Zvinotyisa, apo aive 8, vose Benfica naPorto vakataura kuti vaifarira kumuisa. Pavakanzwa nyaya idzi, vabereki vaDiogo Dalot vakasarudza kutora mwanakomana wavo kumapoka maviri kuti amuidze.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Vana vavo vanoshamisika vakapedza vhiki mbiri neEagles muLisbon uye vakawana muedzo wakabudirira. Asi imwe nyaya yakasara. Ndizvo "mufambo". Vabereki vaDalot vakawana izvozvo; nzvimbo iri kubva kuBraga (imba yavo) kuLisbon yakanga yakawanda. Izvi zvakaita kuti vafunge FC Porto iyo yakava yakasarudzwa zvikuru, kunyanya nokuti Dalot yakatsigira Dragons.
Achitenda kuchisarudzo chemhuri yake, Dalot akazobatana naFerto Porto. Haana kumbozvidemba pamusoro pechisarudzo ichi kubva mushure mekunge apinda muchikwata. Dalot akanga asati ari munhu akadzingwa. Zvakanaka, basa rake rakatakura meteoric.
Dalot akaita kufambira mberi nokukurumidza uye akazoonekwa munyika yose seimwe rematambudziko makuru ePorto's academy. Zvinotyisa, nezera re16, akanga atove achidzidzisa neboka rekutanga. FC Porto anorondedzera iye se "imwe yemazuva ano-yakazara, ine chido chokurwisa". Izvi zvakabata maziso Jose Mourinho uyo akamuwana kuti ave United pa 6th yaJune, 2018.
Kuenda kwaDalot kuWal Trafford kwakaisa njodzi yokukwegura Antonio Valencia uye Ashley Young uyo akatonga zvose zvakasara uye zvisiyiwa kumashure kumashure asati asvika.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasina mubvunzo, Vatambi vakagara vainge vakakombwa nevanasikana vakanaka uye ngoro. Kuona uyo wechiduku Diogo Dalot ari kufambidzana zvechokwadi achasimudza mashizha kunyanya pakati pevamwe maMan United United.
Pari zvino, sezvatiri kunyora, makuhwa ave achibhururuka nepamusoro pekasikana wake. Peharbs, Diogo Dalot iye zvino anorarama munguva yaanofunga "wo kutanga " kuratidza hukama hwehukama hwake kuvanhu.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Personal Life Facts
Zita rake 'Diogo'ishanduro yechiPutukezi yezita'Diego' zvinoreva kuti 'Muongorori anofamba-famba; mupfumi mune zvipo'
Diogo ane ushamwari chaizvo uye kazhinji anozviwana ari neboka rehama.
Diogo Dalot haana kuzvikudza. Anogara achida kubatsira vamwe, asingatarisiri kuita chimwe chinhu.
Pamusoro pezvinyorwa zvake, Diogo Dalot haadi vanhu vanoti vanoziva-izvo-zvose. Iye haadiwo kushorwa uye utsinye hwemarudzi ose.
Mishumo inoratidza kuti Diogo Dalot uye C Ronaldo ndivo shamwari dzepedyo.
Ichi ndicho chikonzero chete chaakaisa rwendo rwake rwekufananidzira rwekufambisa nekubatana neMan United.
Diogo Dalot Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Career Life Facts
Paakasayina United, Dalot akati ...
"Handichazombokwanisi kutaura kuPorto, nokuti hauzombotauri kune mumwe wemhuri yedu. Hapana mutambi wenhabvu anokwanisa kuramba kushanda mukibhuki seManchester United uye achishanda naye José Mourinho. "
Kana iwe wakambokwira Football Manager pane chero nguva, iwe unogona kunge wakanzwa nezvaDoogo Dalot.
Anowanzotanga semudziviriri anovimbisa uyo, mushure memakore mashomanana, anowana kukura kukuru uye anochinja kuva a Dani Alves or Sergio Ramos.
Muzera rake reboka, iye ndiye akakwanisa kuzadza muEurope. Diogo mutadzi wechidiki ane tarenda ane utsi hwehuse hunoita kuti ave nokukurumidza kuva mutambi mutsva munyika yose. Ane zvese izvo zvinodiwa izvo zvakakwana-zvese zvinodiwa: hutano, tactical intelligence uye unyanzvi hwehutano, hubatanidzwa nepfungwa dzePorto Academy dzinogadzirira vateereri kukura kwavanoda pane zvehutano.
Pamberi peManchester United akawana Dalot, VaMal Madrid vose neCc Barcelona vakarwa neChitutu. Mutsara wekodzero wakakonzera kutarisa kwemaLain Major giants apo akabatsira nyika yake kukunda 2016 European Under-17 Championships, vachirova Spain mukupedzisira.
Kusakwana Kwake: Diogo Dalot ane imwe netsoka uye anofanira kudzidziswa kukudziridza rutsoka rwake rworuboshwe. Imwe nzvimbo yakashata inofanirwa kuisa pfungwa pakuva nehunobudirira hwekudenga. Ane basa rokuita nedhipatimendi rinotungamirira.
CHOKWADI KUTI: Tinoonga nekuverenga Diogo Dalot Childhood Indaba yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Rui Patricio Utano Nhau Plus Untold Biography Facts